चिनिया राष्ट्रपति सीको सन्देशले नेकपालाई जोड्ला? – Everest Times News
चिनिया राष्ट्रपति सीको सन्देशले नेकपालाई जोड्ला?
२०७७ पुष १२, आईतवार १९:५६
काठमाडौं । संसद बिघटनलगायत पछिल्लो घट्नाक्रमको जानकारी लिन चीनले उच्चस्तरिय टोली पठाएको छ । पछिल्लो समय उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमका बारेमा चासो लिंदै आएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्न चीनबाट उच्च तहका नेताको नेतृत्वमा एक टोली आइतबार काठमाडौं आइपुगेको हो ।
चीनबाट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रिय कमिटी, अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुइ यान लगायतको चार सदस्यीय टोली काठमाडौं आएका छन् । उक्त टोली बेइजिङबाट छङ्तु हुँदै आइतबार मध्यान्ह काठमाडौं उत्रिएका हुन् ।
यो टोलीले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्नुका साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन्देश लिएर आएको बताईएको छ । चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी यसअघि नै नेकपाका नेताहरुसॅग छलफल गरिसकेकी छिन् । उनैको रिपोर्टको आधारमा उच्चस्तरिय टोली आएको हो । यसअघि पनि नेकपामा बिबाद हुॅदा राजदुत सक्रिय हुने गरेकी थिईन् ।
यस पटक उनले मिलाउन नसक्ने भएपछि बेईजिंगबाटै उच्च तहको टोली आएको हो । के फुटी सकेको नेकपालाई राष्ट्रपति सीको सन्देशले जुटाउन सक्ला? प्रश्न उब्जिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश: प्रधानमन्त्री कामचलाऊ, २० मन्त्री पदमुक्त
खुल्ने भयो नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान
अलाबामामा दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु
बाढीपहिरोमा परेर एक सातामा २० को मृत्यु
गृह मन्त्रीको निर्णयबाट १६ डिआइजीको सरुवा
उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो, निजी सवारीमा जोर बिजोर लागु हुने
विदेश भ्रमणलाई यि २२ निजी अस्पतालको पिसिआर रिपोर्ट मान्य हुने
माइक्रोसफ्टका अध्यक्षमा भारतीय मूलका नाडेला
1 जुलाई ४ मा शेर्पा किदुगको रजत जयान्ती शुभारम्भ हुने
2 तमु परिवारको अध्यक्षमा मनिता गुरुङ निर्वाचित
3 न्युयोर्कको प्रतिष्ठित क्विन्स वर्ल्ड फिल्म फेस्टिभलमा दुई नेपाली चलचित्र छनौट, जुन २६ र २७ मा प्रिमियर गरिदैं
4 रुस र चीनलाई पाठ सिकाउँदै बाइडेन
6 खुल्ने भयो नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान
7 अमेरिकामा घरजग्गा किन्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
8 अमेरिकामा नेपाल डे परेड गर्ने बारेमा किन हुदैछ विवाद ?
9 बाढी, पहिरो र डुबानमा परी १० जनाको मृत्यु